Komorebi: Sidee loo qaabeeyaa Miisaskeena asal ahaan xamaasad leh? | Laga soo bilaabo Linux
Ku sii wad annaga maqaalada shaqsiyeynta, maanta waxaan soo bandhigi doonnaa barnaamaj weyn oo aad u faa'iido badan oo loogu talagalay ujeedkan, laguna magacaabo Komorebi.
Haa Komorebi waa codsi heer sare ah oo u shaqeeya sidii qurux iyo wax la beddeli karo Maamulaha darbiga (darbiyada) go'an oo loogu talagalay Linux, iyo in la mid ah Conky, wuxuu noo ogolaadaa inaan siino taabasho gaar ah kuweena Miisaska, si aan ugu tusno kuwayaga shaashadaha shaashada maalmaha aan xusno kuwayaga #DesktopDay.
Meel fog kuma sii socon doonno sharraxaadda waxay tahay Komorebi, tan iyo, ku dhowaad 3 sano ka hor waxaan mar hore ka hadalnay wax ku saabsan codsi markii ay ahayd heerka beta. Si kastaba ha noqotee, isaga oo taas daliilinaya post la xiriira hore, waxaan dhihi karnaa:
"Komorebi waa maamule qurux badan oo qurux badan oo muusig ah oo Linux ah, waa ilo furan waxaana ku diyaariyay Vala Abraham Masri. Qalabku wuxuu leeyahay sooyaal la beddeli karo oo loo qaabayn karo siyaabo kala duwan iyo wakhti kasta, wuxuu leeyahay shaashado badan oo shaashad ah (animated, static, gradient, etc.)" Komorebi: Maareeyaha gidaarada qurxoon ee la qurxin karo
Qoraalkan hadda waxaan diiradda saari doonnaa wax badan sida loo isticmaalo noocaaga hadda jira.
1 Komorebi oo ku saabsan XFCE
1.1 Adeegsiga Komorebi + Windows Header + AppMenu Module
Komorebi oo ku saabsan XFCE
Adeegsiga Komorebi + Windows Header + AppMenu Module
Si loo sharaxo sida loo helo shaashad shaqsiyeed oo shaqsiyeed, sida midka ka muuqda sawirka kore isla markiiba, waxaan adeegsan doonnaa GNU / Linux Distro wac MX Linux 19.3, gaar ahaan Respin shaqsiyeed loo magacaabay Mucjisooyinka.
Waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa rakibidda Komorebi, ka soo degsanaya adiga bogga rasmiga ah ee GitHub, Rakibiyaha saxda ah ee a GNU / Linux Distro sida tii aan ugu adeegsan jirnay Casharradan, oo ku dhisan Debian 10 isticmaalna XFCE. Si tan loo sameeyo, waxaad sidoo kale gujin kartaa xiriirka soo socda: komorebi-2.1-64-bit.deb.
Ka dibna waxaan u gudubnaa inaan ku rakibno habka ugu raaxada leh mid kasta. Xaaladeena, waxaan isticmaalnaa amarka soo socda:
Ka dib markii la rakibo, waxaan sii wadaynaa inaanu fulino adoo ka raadinaya Liiska Codsiyada, qaybta Nidaamka. Marka la furo, waxaa lagu fulin doonaa asal ahaan, cusub Mawduuca Desktop Default (Waraaqaha Desktop). Ku Liiska qaabeynta Waxaa lagu heli karaa adigoo gujinaya midig Desktop-ka. Tan ku saabsan, iyo ikhtiyaarka ah «Beddel Waraaqda» (Beddel Waraaqda) waxaan dooran karnaa midka aan dooneyno.
Halka haddii aan dooneyno inaan mid cusub ku darno, kaliya waa inaan nuqul ka saarnaa galka jira «/System/Resources/Komorebi/» oo u bixi magaca. Kadib beddel faylasha «video.mp4» y «wallpaper.jpg», kuwa aan doorbidno ku hayno magacyo isku mid ah. Markaa waan arki karnaa oo ka dooran karnaa Liiska qaabeynta, ka hawlgelinaya. Waxaas oo dhan, sida lagu arkay sawirrada hoose ee isla markiiba.
Nota: Muuqaalkeena (Animated background) ayaa laga soo degsaday shabakada Desktop Hut.
Kuwa doonaya inay habeeyaan a Liiska Caalamiga ah dalabyadaada Habka Mac OS ee ka sarreeya XFCE, kaliya ku dar a Guddi sare oo dheeri ah (Guddi 2), kuna dar walxaha soo socda: «Windows Header - Buttons» y «Módulo AppMenu». Sida ku cad sawirrada soo socda:
Marka talaabooyinkan oo dhan la fuliyo, ee ku habboon GNU / Linux Distro con XFCE iyo adeegsiga Komorebi y AppMenu, Qof kastaa wuxuu yeelan doonaa Miis cusub oo dhalaalaya si uu ugu muujiyo Kooxda ama Bulshada ay jecel yihiin, maalinta saxda ah ee «DiaDeEscritorio».
Iyo hadaad rabto inaad isticmaasho a Conky sida midka kor lagu arkay badan, waxaan kugula talineynaa aqrinta qoraalkeena hore ee laxiriira Konkys:
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «Komorebi», Codsigaas cajiibka ah ee u shaqeeya sida quruxda badan ee loo habeyn karo maareeyaha waraaqaha sawiran ee go'an iyo kuwa firfircoon loogu talagalay Linux, iyo sida Conky oo kale, waxay noo oggolaaneysaa inaan si gaar ah u taabno annaga Miisaska, si aan ugu tusno kuwayaga shaashadaha shaashada maalmaha aan xusno kuwayaga «DiaDeEscritorio»; waa mid aad u daneyn iyo faa iido u leh, dhamaantiis «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Komorebi: Sidee loo qaabeeyaa Miisaskeena asal ahaan xamaasad leh?
Cygnus-X1, oo ah loox il furan oo loogu talagalay xakamaynta gantaallada guriga
FFmpeg: Dib-u-eegis Kooban oo loogu Dabaaldegayo 20-kii sano ee ugu dambeeyay ee Linux